China na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ka ọkpụkpụ na-eme ngwa ngwa na ndị na-emepụta ya | AoFeiTe
Neghaghachi D Neck Dọkịta Na-atụgharị Ahụ
Nodị No.: AFT-NH001
Njirimara:Enyemaka olu mgbu
Product aha:Hamda Hammock
Agba:Nwa & Grey
Ojiji:Ojiji kwa ụbọchị
Akara :: Ahaziri Logo
Velvet na-egbu ume na ezigbo ikuku ikuku: Ihe eji eme ihe n'olu site na ịgbatị olu gị.
Ya velvet ume na-enyekwu nkasi obi na izu ike, ezigbo ikuku ikuku, na-enyere aka belata
nkwesi olu ike ma belata olu mgbu maka ndị na-eleda kọmputa na ekwentị mkpanaaka anya
Mesikwuru na-agbanwe eriri & Elu kpachie: Unique imewe na sie ike eriri na-agbanwe maka abawanye
ngbanwe na iguzogide ibu ka ukwuu. Stitch dị elu na-enyere aka hụ ogologo oge na-adịgide adịgide
na nkasi obi.
Biko Obiọma Rịba ama: isi mkpuchi ụkwụ maka mgbu mgbu agaghị arụ ọrụ na obere oge. oukwesịrị idobe
iji ya eme ihe kwa ụbọchị. 10-15 nkeji oge ọ bụla na-atụ aro ya. Mgbe obere oge gachara, ị ga-eji nke nta nke nta nweta nsonaazụ ya.
Akara: Akara Akara ahaziri Ihe: Fofụfụ Cotton Agbakwunyere Ama Nkwakọ ngwaahịa: 1 ibe / pp Akụrụngwa: 50000 Ibe / Pieces per Month Brand: Aofeite Transportation: Ocean, Land, Air Place of Origin: Hebei, China (Mainland) Tụkwasịnụ Ikike: 50000pieces / ọnwa asambodo: OA / FDA / ISO9001 / ISO13485 Port: Tianjin
Na-achọ ezigbo Cervical Traction Manufacturer & supplier? Anyị nwere nhọrọ dịgasị iche iche na nnukwu ọnụ ahịa iji nyere gị aka ịmepụta ihe. All na Kemeghi D D Hammock na-ekwe nkwa. Anyị bụ ndị China si Factory nke olu Relaxing Olu hammoku. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ngwaahịa ngwaahịa: Olu Nkwado Nkwado
Osote: Elu àgwà weightlifting ahụ-ụlọ eriri
Inflatable ụgbọ ala olu support ịhịa aka n'ahụ njem ohiri isi
Ọkpụkpụ ire maka olu mgbu mgbu ubu na iri ...
Plastic cervical olu warmer nkwado na-akwado ihe mgbu
Olu mgbu ngwaọrụ ubu ịhịa aka n'ahụ belt
Isiike Ajọ Nkwado ctiondọtọ
Disposable n'olu ohiri isi ebe nchekwa ụfụfụ njem mkpuchi